Wareegyada Miiska Wareegsan
Marka la barbardhigo daboolida miiska caadada u ah, wareega miiska ee wareega leh wuxuu umuuqdaa mid aad ufiican Ka sii muhiimsan, daboolka miiska wareega wuxuu si fiican ugu habboon yahay cabbirka miiskaaga. Kufiican munaasabadaha kaladuwan, iyadoon loo eegin waa bandhig ganacsi, xaflad ama olole ganacsi, miisaska sifiican loogu talagalay miisaska wareega miiska hubaal way kugu riyaaqi karaan.
Daboolka miiska caadiga ah ee la rakibay waa mid ka mid ah aaladaha dhiirrigelinta ee inta badan loo isticmaalo bandhigyada ganacsiga, bandhigyada ama bandhigyada. Iska ilaali daboolida miiska caadada kuu ah! Waad isku duwi kartaa shaashaddaada oo leh dabool miis daabacan oo saameyn xoog leh oo muuqaal leh oo xiri kara macaamiisha mustaqbalka isla markaana kicin kara.